Kabo noocee ah ayaa ku habboon socodka xeebta? | Ragga Stylish
Ku soco xeebta. Cago la'aan ama kabo noocee ah?
Xagaagii waa halkan. Xeebta ayaa ah halka ugu badan ee dadku ku nastaan, inaad ka faa'iideysato maalmaha qoraxdu, iska iloobo shaqada, waxqabadka caadiga ah, walbahaarka.
Mid ka mid ah waxqabadyada ugu raaxada badan xeebta waa socodka ciidda, badda agteeda. Waqtiga ayaa la gaadhay go'aansado nooca kabaha aan ku sameyn doono, taas oo ah tan ugu habboon.
Waxa ugu horreeya ee la muujiyo waa dareemid xorriyad iyo qanacsanaan taas oo dhalisa xiriirka fudud ee dusha sare ee badda iyo cagaha.
Khabiiro gaar ah ayaa sidoo kale tilmaamaya faa'iidooyinka wadnaha, marka lagu daro socodka ciidda wuxuu doorbidaa wareejinta qaar ka mid ah macdanta sida iodine, oo aad waxtar ugu leh fuuq-celinta maqaarka iyo murqaha murqaha
2 Loogu talagalay orodyahanada
Caadi ma aha, laakiin waxaa jira kuwa doorbida maqaarka ha dul saarin dusha bacaadka ah, ama raaxaysi ama cabsi dhaawac darteed. Waa run in ay jiraan waqtiyo iyo meelo ay jiraan ilaalinta cagahaaga waa ikhtiyaarka ugu fiican: meelaha leh dhagxaan badan ama qolof fiiqan, iyo sidoo kale meelo sibiibix ah sida dhagxaan.
Waxaa jira xulashooyin badan oo kabaha la gashado, laga soo bilaabo boodbooda iyo kabaha kabaha ilaa dhammaan noocyada kabaha aan biyuhu xirin
Laga soo bilaabo kooxda koowaad waxaan iftiimineynaa kooda ficil ahaaneed: fududahay in la xidho, fududahay in laga baxo. Sida kabaha xiran ee si buuxda u ilaaliya cagta, noocyada kala duwan ayaa ka mid ah moodooyinka adag ee socodka dheer ama socodka, la jaanqaadi kara sagxadaha jilicsan ama meelaha leh dhagxaanta oo sibiibix noqon kara.
Waxaa sidoo kale jira moodooyinka fudud (oo badanaa loogu yeero kabaha biyaha), qalab loogu talagay dabaasha ama la dabaasha iyaga, laakiin taasi waa la isticmaali karaa marwalba.
Loogu talagalay orodyahanada
Ku orod cidhifka bada waa hawlo kale oo xagaaga loogu jecelyahay. In kasta oo ay jiraan fikrado ka soo horjeedka iyo ka soo horjeedka dhaqankan, ku orodka ciidda cagaha cagaaran ayaa farxad u ah dad badan.
Kuwa doorbida inay xirtaan kabaha, tallada kaliya ayaa ah inay leeyihiin a model isboorti gaar ah loogu talagalayXaqiiqdii waxay ku dambayn doonaan ciid buuxda oo uma baahnid inaad nadiifiso maalin kasta.
Ilaha sawirka: Jacaylka Daryeelka /Caado iyo Dacaayad
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Ku soco xeebta. Cago la'aan ama kabo noocee ah?
Koofiyado leh motif ama sabab loo xirto koofiyado